ဦးအေးကို B.A (Electronec) အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာပြုပြင်နည်း
ဦးအေးကိုကို B.E (Electronics)ရေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ခြင်း အခြေခံနည်းစနစ်နှင့် တကယ့်လက်တွေ့ပြုပြင်ခြင်း မှတ်တမ်းများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ .. အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိပါတယ် . အခုတင်ပေးတဲ့ စာအုပ်တွေဟာ hardware ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် . ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ hardware ပိုင်းကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားသလို တစ်ကယ်လဲ လက်တွေ့လုပ်ခဲ့ပါတယ် . အခုစာဖတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတောင် ကျွန်တော်နဲ့ အပြင်မှာ တစ်ကယ် ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေ ရှိကောင်းရှိနေမှာပါ . နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် hardware နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြောပြသွားပါ့မယ်
အခုတော့ တင်ပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေကို အားပြုပြီး Download လုပ်သွားကြပါဦး . Hardware နဲ့ software ပိုင်းမှာ ဘယ်ဟာက ပိုခက်လဲလို့တော့ မမေးပါနဲ့ . နှစ်ခုလုံးဟာ ခက်ခဲကြတာပါပဲ . ကျွန်ပျူတာကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မယ် . ဘယ်လိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာဟာ ပုံသေနည်းမရှိသလို . တသမတ်တည်း မကျပါဘူး . ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဟာ hardware ပါပဲ . ဒီစာအုပ်လေးကို လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ကြပါ .. ကျွန်တော့်ကို ခင်တယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံး အခုအချိန်မှာ ကွန်ပျူတာ hardware ပဲဖြစ်ဖြစ် software ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ကယ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုများ မေးမြန်းနိုင်သလို ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပေးသွားမှာပါ. လက်လှမ်းမှီ သလောက်ပေါ့ . ဒါပေမယ့် တစ်ခါတည်း စကားတစ်ခုတော့ ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန် ထားချင်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ကို ခင်တယ် ချစ်တယ်ဆိုရင် . ဘယ်တော့မှ hacking နဲ့ပတ်သက်တာတွေ မမေးဖို့နဲ့ . သူများမေးလ်တစ်ခုရဲ့ passward ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မမေးဖို့ ကြိုပြီး တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ် . တစ်ခြားပတ်သက်တာတွေ မေးနိုင်မြန်းနိုင်ပါတယ် . သူငယ်ချင်းတို့လိုပဲ တစ်ချိန်က chatting ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ် . ပျော်ခဲ့တယ် . အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ကွန်ပျူတာတိုးတက်ဖို့နဲ့ ဒီ့ထက်ကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုတည်းပဲ ရှိတော့တာပါ . သူငယ်ချင်းတို့လဲ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ chatting မှာ တစ်နေ့လုံးထိုင်ပြီး စကားပြောနေတာတွေကို ရပ်တန့်ပြီး နည်းပညာပိုင်းတွေဘက်ကို လိုက်ပြီးလေ့လာလိုက်ပါ . တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် . အချိန်မှီပါသေးတယ် . နည်းပညာဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာ မရှိသလို . ပြီးစီးသွားတယ်ဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး ..